Fumana indlela yokusebenzisa iifilitha kwi-Photoshop ngesi sikhokelo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | ngokubanzi, Tutorials
Vula i-photoshop, ithebhu yefayile. Kuyafana nokuthi xa sihlela siyisebenzise ngaphandle kokwazi kakuhle ukuba izakusisebenzela njani kwaye ngamanye amaxesha siye sincame kuba asizifumani kakuhle iziphumo esizifunayo. Kude kube ngoku, bebekwazi ukuba bangabonwa kwaye amandla abo ebenganakwa. Ngokukodwa ukuba sithetha ngegalari. Fumanisa ukuba zisetyenziswa njani iifilitha kwifotoshop kwi (Amacebo okucoca kunye neGalari yokuCoca).
Iifilitha zikuvumela ukuba usebenzise iziphumo zeendlela ezahlukeneyo ezinje ngobugcisa, ukugqwetha ukukhanya, kwimifanekisonjl. Kwaye ayisiyiyo eyokwendalo kuphela, sinokubangenisa kwiimodyuli zangaphandle. Ezi zihluzo zinokusetyenziswa kulo lonke uxwebhu, kwindawo ethile okanye kumaleko. Ewe kufanele ukuba ineepikseli, ayinakuba ngumaleko ongenanto.
Ukuba ungomnye wabo babenobuganga bokuzisebenzisa kodwa bangaboni siphumo sikhulu, kusenokwenzeka ngenxa yoqwalaselo lwabo. Ezinye izihluzi zibonwa ngokuthe ngqo kumbono wangaphambili khetha nje kubo kodwa ezinye kuya kufuneka uziqwalasele njengoko unqwenela ukwenza uxabiso ngotshintsho.
Ngaphambi kokungena kwigalari, apho siza kufumana iziphumo ezininzi ezahlukeneyo, siza kuya kukhetho oluza kuthi gqi ezantsi kwaye olugqibezela le khokelo.
Ukubona iziphumo qiniseka ukuba ukhetho 'lokujonga kuqala' kunye 'bonisa izithintelo' lukhangelwe.
1 Isihluzo> I-Angle ebanzi eguqukayo
1.1 Izinketho zesithintelo
2 Ukulungiswa kwelensi
3 Ukukhetha ukutywala
4 Indawo yokunyamalala
4.1 Lungisa kwaye utshintshe umfanekiso
5 Icebo lokucoca ulwelo
Isihluzo> I-Angle ebanzi eguqukayo
Esi sihluzo senzelwe ukulungisa iimpazamo kwiifoto zokudubula zeelensi ezibanzi zeekona. Ukulungisa ezinye zazo ngokubanzi. Eyona nto intsha ibaluleke kakhulu kwiinguqulelo ezintsha zefotoshop (Ukuba awunayo i-CS6 okanye i-CC, awuyi kuba nayo) kukuba ungasebenza kwiindawo ezithile zomfanekiso kwaye ulungise ukukhubazeka ngesandla. Ke, ukuba isiphako sikwindawo ethile kuphela, awuzukuguqula nantoni na ngaphandle kwale ndawo.
Ukuba uyasebenza, umzekelo, kukhetho: 'nembono'kwaye siyaguqula, Siza kuba neziphumo ezininzi esiza kuzinika umfanekiso. Ukuba uyisebenzisa ngokungathi uphambene, ungabona indlela umfanekiso ogqwetheke ngayo ngendlela ebaxiweyo. Kodwa, ukuba ufuna ukujika okanye ukusondeza, cofa nje kwiikhrayitheriya ezithile ezinje ngesityalo okanye kubude obugxile kubo. Nanku umzekelo wendlela oza kuwubona ngayo umfanekiso wokwenyani kwaye uza kuba njani ngokufaka kwakhona iikhrayitheriya kolu: Isikali: 103, ubude beFocal: 3,01 kunye neCrop factor: 8,52.
Umfanekiso wokuqala unomgama ukusuka kwinto ephambili, ekule meko ngamahashe. Ngoku siza kubona enye nge-Adaptive Wide Angle.
Ngaba uyalubona utshintsho? Umfanekiso usondele njani kuthi kwaye wahluthwa? Lo ngumzekelo olula. Yenziwe malunga nenketho yokujonga. Kukwakho nefisheye, ulungiso oluzenzekelayo okanye olupheleleyo lomhlaba. Ukhetho lweFisheye lunokugqibelela njengoko ndisitsho kwii-engile ezibanzi, unike isiphumo esigqwetheke kancinci sokufota kunye nobubanzi. Ukuzoba umgca ojijeke ngakumbi kunomfanekiso othathwe ngekhamera yethu.
Izinketho ezisekhohlo ziya kukwenza ulawule ngakumbi kwifotoNgokuwela umgca othe tyaba kunye nesixhobo sokuthintela, uya kubona ukuba uyilungelelanisa njani kwigophe lomfanekiso wakho ngokungathi ubutsalane. Xa ukhupha imouse isihluzi siya kulungisa ijika. Ngokucacileyo, umfanekiso uya kugqwethwa, ngakumbi ngumzobo, oya "kususa" inxenye yomfanekiso. Ukuba awuyithandi indlela ebukeka ngayo, unokuyihlengahlengisa, Cofa kwi Ctrl + Z (Kwimeko yeMac Cmd + Z) ukubuyela umva okanye ususe eli nyathelo ngokucinezela isitshixo se-ALT kunye nokucofa kwemouse ngasekhohlo.
Lo ngumzekelo womfanekiso onezithintelo:
Akubonakali kunomtsalane, akunjalo?. Ngoku yibeke phantsi komfanekiso woqobo uthabathe ukukhanya okanye ususe iindawo ezithile ozikhethayo kumfanekiso wokuqala ngokusebenzisa iibrashi okanye ngebrashi iindlela zokudibanisa, oya kuthi uyazi ukuba yintoni malunga nokufundisa kwangaphambili. Lo ngumzekelo:
Ukuba sibona phambi komfanekiso wokuqala oboniswe apha ngasentla, siya kuqaphela utshintsho olukhoyo ngokubhekisele koku kunye nezithintelo. Ingca, intaba kunye nesibhakabhaka ziindawo ezibonakalayo zotshintsho.
Ngendlela efanayo ngoku siya kwifilitha> Ukulungiswa kweelensi, olu khetho luya kusivumela ukuba silungise ukuhanjiswa ekuthatheni izimvo kusetyenziswa iiparameter ezininzi ezisetiweyo kunye nohlengahlengiso olunamandla.
Ukuba ikhamera yakho ayisosiphelo esisezantsi, esisezantsi okanye esiphakathi, njenge-canon 1200D, unokufaka uhlengahlengiso olukhawulezayo ngesi sixhobo. Kule meko, uya kuba nakho ukukhetha indlela yokwenza kunye nemodeli yekhamera othathe ngayo umfanekiso kwiikhrayitheriya zokukhangela. Ngale ndlela uza kubona ukuphuculwa okumiselweyo ngexesha lokwenyani.
Ukuba ufuna ukufaka imilinganiselo ebhetyebhetye ngakumbi, umzekelo, ukubuyisela i-fisheye okanye iimbono ezibanzi ze-angle, siza kukhetha i-'Siko '. Sihlengahlengise ubugqwetha bejiyometri, imbono ethe nkqo kunye ethe tye, i-engile kunye nesikali yokufota. Le mifanekiso ilandelayo iya kusinika iziphumo ezibonelelweyo. Nganye ngokukodwa iya kufuna iisetingi ezithile kwaye zingacwangciswa.
Yizame ngokwakho kwaye uphawule ngeziphumo zakho ukuze sikwazi ukuzivavanya, ngokuqinisekileyo ziphume ngcono kunam. Esi sisifundo, ke asimisanga ukunika iziphumo ezingakumbi kuba sinokuchitha ixesha elininzi kwimizekelo nganye.
Esi sihluzo sisivumela ukuba sikhubazeke kwindawo enkulu okanye encinci yenxalenye yomfanekiso ukusebenzisa iinguqu ezahlukeneyo kuyo. Kuzo zombini iibits ezisibhozo kunye ne-8 yeebhitjhi kwisitishi ngasinye Khetha kuqala umaleko oza kunyibilikisa kuwo, ukuba uyaphazama njengamaxesha onke, ctrl + z (cmd + z on Mac). Yiya kwisihluzi> Liquify okanye chwetheza ctrl + shift + X (cmd kwimeko yeMac).
Ukuba une-Photoshop CS6 kuya kufuneka ucofe ukhetho lwe 'Imowudi ephezulu' ukubonisa onke amathuba. Kwimeko apho i-CC, ngekhe kubekho ngxaki kuba uya kuba neenketho esele ziphawulwe ngokusilelayo.
Masiqale sibonise iimod / warp izixhobo ezivela kwiqela lasekhohlo. Ezinye izixhobo ezifana nesiphatho okanye ukusondeza ziya kuba sele ziqhelekile kuwe. Azikho ngqo apho siza kuyeka khona. Siqala ngowokuqala, yiya phambiliPush pixels phambili njengoko isixhobo sitsalwa ngaphesheya komfanekiso.
Ke, umfanekiso awukhangeleki ulungile, sebenzisa indlela yokudibanisa kuyo njengokukhanya okuthambileyo.
I-Pinwheel ngakwesokudla: Yenza ujikeleziso lweepekseli kwicala elisekunene. Ukuba ucinezela i-Alt (kuzo zombini i-PC kunye neMac) uguqula umjikelo. Chaza: Njengoko igama layo libonisa, iyasusa. Oko kukuthi, ihambisa iipekseli ukuya kwiziko. Oku kwenza ukuba umfanekiso ugxile kwaye ubonakale ngathi uphuma ngaphandle. Ukunyuka: Endaweni yokuba ibatyhalele ngaphandle ngeepikseli.
Cofa ngasekhohlo: Ihambisa iipikseli ngasekhohlo kwendawo elandelelweyo xa isixhobo sitsalwa senyuka emfanekisweni. Ukuba ukhetha ukubuyisela umva kwicala, cinezela Alt.
Lo msebenzi ukuvumela ukuba uchaze iiplanethi ezibonakalayo kumfanekiso ukuze wenze utshintsho kunye nokubamba kwakhona. Olu tshintsho lwenziwa kwindawo ethile ngokubhekisele kumbono wayo. Gcina izinto ezintathu engqondweni ukuyigcina isebenza kakuhle. Ukuba uhlengahlengiso luyinxalenye, khetha icandelo lomfanekiso ofuna ukulilungisa. Kunjalo, phinda umaleko ukuba kunokwenzeka unayo nayiphi na impazamo, ukuwuguqula kwaye ukuba utshintsho lwonyusa ubungakanani bomfanekiso, wandise indawo osebenza kuyo.
Sebenzisa isixhobo se 'Yenza iSicwangciso' ukuchaza ii-engile ezine zeenqwelomoya. Ucofa kwivertex nganye ukubeka amanqaku. Ukuba igridi eluhlaza okwesibhakabhaka ibonakala ilungile. Ngombala otyheli ukuba amanqaku awavumelekanga. Yijonge, kuba ngekhe ukwazi ukuhlela.
Yenza igridi yendiza icace ngokufaka ixabiso kumhlaba 'wobungakanani beGridi'. Ukukhetha kunye nokuguqula inqwelomoya, khetha ukuhlela inqwelo moya kwaye ucofe inqwelomoya ngokuyirhuqa.
Lungisa kwaye utshintshe umfanekiso
Kwifestile yenqaku lokunyamalala unokuphinda umfanekiso okanye iindawo ezikuzo. Manzi, upeyinte okanye usebenzise utshintsho. Ukuphinda indawo, sebenzisa isixhobo sesitampu. Lungisa ukhetho lwezixhobo: Ububanzi, ubunzima (ichaza ukuguda). Opacity kwaye ichanekile. Yenziwe icinyiwe: Akuyi kubakho kuxubana phakathi kweenkcazo kunye nemibala, izithunzi kunye nokuthungwa kwezi pixels zilandelayo. UkukhanyaUkudibanisa imijikelezo kunye nokuqaqamba kweepikseli. Vuliwe: Ukuhlanganiswa kwemigca enemibala, izithunzi kunye nokuthungwa.
Ukuqala, khetha umaleko oza kuwusebenzisa ukufaka iifilitha ezahlukeneyo zomfanekiso. Yiya njengoko besitshilo ngaphambili ukucoca igalari. Kwiwindow pop-up ungakhetha nayiphi na kuzo ngephanyazo, nakwimbonakalo ungasondeza ukuze ubone ngcono into oyitshintshayo.
Kwi icon yoxwebhu engezantsi ungabona indlela yokongeza iifilitha ezintsha ukugqagqana phakathi kweqela okanye ukuphelisa ukuba akukho luncedo kuwe. Kananjalo unokufihla ezinye ukuba ngalo mzuzu awufuni ukujonga ngaphambili kwi icon yamehlo. Ndiza kongeza umfanekiso ukuze ufumane umbono.
Ezi unokuzibona ngexesha lokwenyani kwaye kulula ukuzibona. Abayi kufuna ulungelelwaniso oluninzi kwaye baya kukwenza ube neziphumo ezininzi kwifoto yakho. Ukwenza uthelekiso, yinto efana nokusetyenziswa kweselfowuni ngoqwalaselo olulula oluya kunika olunye uchukumiso ekufotweni. I-tweak elula kuseto lomfanekiso inokulinganisa ukubamba kweeapps.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Fumana indlela yokusebenzisa iifilitha kwi-Photoshop ngesi sikhokelo